ရိုးရိုးကြွေပြားကပ်ကော်ဖြင့် ရွံ့စေးကြွေပြားများကို ခင်းကျင်းနိုင်သော်လည် အပြင်ပိုင်းခင်းကျင်းမှုအတွက် အထူးကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းရှိသော အထူးထုတ် ကြွေပြားကပ်ဘိလပ်မြေကော်ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင်ကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် တားဆေးများအသုံးပြုပြီးမှသာ ကြွေပြားကပ်ခြင်းနှင့် နှာကြောင်းကျယ်များကို လက်ခံနိုင်သည့် နှာကြောင်းဖြည့်ကော်များ အသုံးပြု ဖြည့်တင်းပေးသင့်ပါသည်။
အဖြစ်များသော ပြဿနာများနှင့် မေးခွန်းများ
1. ရွ့ံစေးကြွေပြားများကို သမရိုးကျမဆာဖြင့် ခင်းကျင
ရွ့့ံစေးကြွေပြားများကို သမရိုးကျ (သို့မဟုတ်) သင့်လျော်မှုမရှိသော ကြွေပြားကပ် မဆလာအသုံးပြု ခင်းကျင်းခြင်း။ ရွံ့စေး ကြွေပြားများသည် ရေစှုပ်ယူနှုန်းအလွန်များပြားပြီး ပြင်ပ ဧရိယာကဲ့သို့သော အပြင်နံရံနှင့် ပလက်ဖောင်းတို့တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ရွ့ံစေး ကြွေပြားများ မခင်းကျင်းမှီထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့်အကြောင်းတရားများသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင် ကျုံ့ဝင်သွားခြင်းမျိိုးမရှိရလေအောင် ရှေးဦးစွာ မျက်နှာပြင်သည် ညီညာမှုရှိရပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော ကြွေပြားကပ်မဆလာဖြင့် ခင်းကျင်းပေးရပါမည်။ သမရိုးကျဖြင့် ပုံခင်းခြင်းမျိုး ကြွေပြားခင်းကျင်းနည်းကို အထူးရှောင်ရှားဖို့လိုပါသည်။ ကြွေပြားပေါက်ထွက်ခြင်း ချော်ထွက်ခြင်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
2. ရွ့ံစေးကြွေပြားများသည် ကျုံ့ကြွနိုင်မှုကြောင့်
အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအလိုက် ရွံ့စေးကြွေပြားများ၏ ဆိုဒ်အရွယ်အစား ပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်။ အခြားသော ကြွေပြားကျောက်ပြားများနျှင့် မတူဘဲ ရွံ့စေးကြွေပြားများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ရှေးရိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းအသုံးပြု ထုတ်လုပ်သောကြောင့် အရွယ်အစား ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ လှပမှုနှင့် ကျုံ့ကြွမှုကို စုပ်ယူပေးနိုင်ရန် လိုင်ကြောင်းကြား အကွယ်အဝေးကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ခြားပေးရန် လိုအပ်လေ့ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ကြွေပြားကျံုဝင်ခြင်း ပေါက်ထွက်ခြင်းမျိုး ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် နှာကြောင်းလိုင်းကျယ် များတွင် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သော အထူးထုတ် နှာကြောင်းကော် အသုံးပြုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. ရွံ့စေးကြွေပြားများ၏ မျက်နှာပြင်သည် အလွန်ရေစုပ်
ရွ့့ံစေးကြွေပြားများသည် စဉ့်သုတ်လိမ်းထားခြင်းမရှိပါက ရေစှုပ်ယူမှုနှုန်း အလွန်မြင့်မားပါသည်။ အဖြစ်မာျးသော ပြဿနာမှာ ကြွေပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဖြူဂျိုးတက်ပြီး သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပေးရန် ခက်ခဲခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင်ကို ကြွေပြားမခင်းမှီ တားဆေးများအသုံးပြုပြီးမှ နှာကြောင်းဖြည့်ခြင်းနှင့် ကြွေပြားခင်းခြင်းမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကြွေပြားမခင်းမှီ မျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်း၊ ညီညာ မာကျောပြီး ဘိလပ်မြေဓာတု အာနိသင်သက်ရောက်မှု မရှိရပါ။
weber.tai fix ဖြင့်ကြွေပြား ခင်းကျင်းခြင်း
နှာကြောင်းမဖြည့်တင်းမှီ ကြွေပြားကပ်ကော်မာကျောမှုရှိအောင် 24 နာရီအခြောက်ခံ ပေးရပါမည်။
နှာကြောင်းလိုင်းကျယ်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည့် အထူးထုတ်နှာကြောင်းကော် အသုံးပြုပေးရပါမည်
5 - 20 mm ကြားအကျယ်ရှိသော နှာကြောင်းလိုင်းကျယ်များ လှပမှုရှိစေရန်နှင့် လိုင်း၏ ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းအတွက် weber.color plus ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
ဧရိယာကို ခြောက်သွေ့အောင်ထား ပေးရပါမည်
နှာကြောင်းကို အနည်းဆုံး 1 -2ရက်အခြောက်ခံပေးပြီးမှသာလျှင် လူဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပြု ပေးရပါမည်။
ဆွဲအား နှစ်ဆမြင့်သော အထူးအရည်အသွေးမြင့် ကြွေပြားကပ်ကော်
Clay tile, kenzai tile, and glass block အတွက်နှာကြောင်းကော်